‘युवा पलायन रोक्ने प्रयास गर्नेछु’ - स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ७, २०७४-सामान्य कामका लागि फाइल बोकेर जिल्ला सदरमुकाम या राजधानी काठमाडौं पुग्नुपथ्र्यो । अब ती कामहरू नगरपालिकाबाट आफैंले गर्दै हुनुहुन्छ ? कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
लामो समयपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । म आफू पनि जनप्रनितिधिको रूपमा निर्वाचित हुने मौका पाएँ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मलाई नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने मतदाताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा बलिदानी दिने सहिदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छु । संघीय संरचना बमोजिमका स्थानीय तह स्थापना भएका छन् । मैले तिनैमध्येको एक नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दैछु । एकदम खुसी लागेको छ । उत्साह, जोस–जाँगर बढेको छ । हामी सामान्य जनप्रतिनिधि मात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत हौं । अत्यन्त संवेदनशील, जिम्मेवारीबोधका साथ संविधान, ऐन, कानुनले दिएको अधिकारको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय शासन सञ्चालनको नेतृत्व गर्न सक्षम हुने विश्वास लिएको छु ।
बन्दुक र स्टेरिङपछि स्थानीय सत्ता ›